Raysalwasaare Kheyre maku imaan doona Puntland Safar ? – Radio
September 28, 2017	254	Like
Warar soo gaarey warbaahinta ayaa sheegaya in dhawaan Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu booqan doono Puntland. Raysalwasaaraha iyo wefdiga uu hoggaamin doono ayaa lagu wadaa in ay ka degaan magaalada Bosaso oo uu hadda ku sugan yahay Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheynaayey in uu booqdo Bosaso, kadibna uu ku maro safar dhulka ah Boosaaso ilaa Gaalkacyo oo kju dhaw 700km masaafo dhanm, waxaa Madaxweynaha ka soo dhex galay safarka Boqortooyada Sucuudiga, waxaana dib loogu dhigay safarkiisa bisha Oktoobar, waa markii labaad ee Madaxweynuhu ka baaqdo safarka Puntland oo aanu tegin tan iyo markii la doortey.
Xafiiska Raysalwasaaruhu kama hadlin wararka sheegaya booqashada uu ku tegaayo Bosaso. Xubno kamid ah Madaxtooyada Puntland oo aan xiriir la sameyney ayaa sheegay in uu jiro qorshe ay ku imaanayaan wefdi ka socda Dowladda Federaalka laakiin aysan ka hor dhacayn.
Safarka la sheegayo in Raysalwasaare Kheyre ku imaanayo ayaa ku soobeegmaya iyada oo Dowaldda federaalka uu saaran yahay culeysyo siyaasadeed oo gudaha ah.
Raysalwasaare Kheyre ayaa hadda ku amqan dalka dibadiisa, waxaana uu ka qaybgalay shirkii loo dhamaa ee Qaramada Midoobey.
Ra’iisulwasaare Kheyre Oo Ka Qeyb Galaya Xaflad Lagu Soo Bandhigayay Wixii U Qabsoomay Guddiga Taakuleynta Ciidamada Qalabka Sida (Sawirro)
Muqdisho (C-Nabadda)-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xalayka qeyb galay munaasabad lagu ...